Point Break (2015) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 5.4/10 59277 votes
Ericson Core, Mariella Pérez, Zoe Simijonovic
BoJesse Christopher, Clemens Schick, Delroy Lindo, Edgar Ramírez, James Le Gros, Luke Bracey, Max Thieriot, Ray Winstone, Teresa Palmer, Tobias Santelmann
လိုငျးဖွတျ သို့တညျးမဟုတျ ကရြှုံးခြိနျနရောတဈခု..မိတျဆှတေို့ရဲ့ Point Break ကရော . ဘယျအခြိနျ.. ဘယျနရောမှာပါလဲ?ဒီဇာတျလမျးထဲက ဇာတျကောငျတှရေဲ့ Point Break ကတော့..ဇာတျလမျးကတော့ ဘကျစုံကြှမျး အားကစားသမားဖွဈတဲ့
ယူတာ့ရျှတဈယောကျ FBI ကို ဝငျဖွဈပုံနဲ့ စတငျထားပါတယျ။သူရောကျပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ စိတ်တဇဆနျဆနျ လုယကျမှုတှပေျေါပေါကျလာပါတော့တယျ။ ယူတာ့ရ်ှဟာ အမှုသှား အမှုလာတှကေိုလလေ့ာပွီးတော့ သံသယရှိသူတှဟော ဘကျစုံကြှမျး အားကစားသမားမြားဖွဈနိုငျကွောငျး တငျပွခဲ့ပါတယျ။ အကွောငျးကတော့အိုဇာကီ ၈ ခကျြ ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နပေေးရငျထှကျရပျပေါကျမယျဆိုတဲ့ အယူဝါဒကွောငျ့ပါ။
ဒီလိုကိစ်စတှကေို လုပျမယျ့သူတှဟောဘကျစုံကြှမျးအားကစားသမားမြားပငျ ဖွဈနိုငျကွောငျး တငျပွခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ FBI အထကျတနျးက အဲ့ဒီအယူအဆကိုလကျမခံခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ယူတာ့ရျှရဲ့ဘော့ဈ ဟောလျက လကျခံပေးလိုကျတာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတငျ အသှငျယူစဈဆငျရေးစတာပါပဲခငျဗြ။အိုဇာကီ ၈ ခကျြထဲကအတိုငျး ကမ်ဘာ့နရော အနှံ့အပွားမှာစတနျ့ပွကှကျတှေ၊ ဒုစရိုကျလုပျငနျးတှကေိုလုပျဆောငျသှားတာတှကေို ရငျသကျရှုမောဖှယျ ကွညျ့ရှုခံစားကွရမှာပါ။စတနျ့ပွကှကျတှေ ဖောဖောသီသီ သုံးထားတဲ့ အကျရှငျခနျးတှအေမြားကွီးပါတဲ့အတှကျ စတနျ့ကားကွိုကျသူတှအေတှကျကတော့လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဇာတျလမျးဖွဈကွောငျးပါခငျဗြား . . .
လိုင်းဖြတ် သို့တည်းမဟုတ် ကျရှုံးချိန်နေရာတစ်ခု..မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Point Break ကေရာ . ဘယ်အချိန်.. ဘယ်နေရာမှာပါလဲ?ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ Point Break ကေတာ့..ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘက်စုံကျွမ်း အားကစားသမားဖြစ်တဲ့
ယူတာ့ရ်ှတစ်ယောက် FBI ကို ဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ စတင်ထားပါတယ်။သူရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ္တဇဆန်ဆန် လုယက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ ယူတာ့ရ်ွဟာ အမှုသွား အမှုလာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ သံသယရှိသူတွေဟာ ဘက်စုံကျွမ်း အားကစားသမားများဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့အိုဇာကီ ၈ ချက် ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေပေးရင်ထွက်ရပ်ပေါက်မယ်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကြောင့်ပါ။
ဒီလိုကိစ္စတွေကို လုပ်မယ့်သူတွေဟာဘက်စုံကျွမ်းအားကစားသမားများပင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် FBI အထက်တန်းက အဲ့ဒီအယူအဆကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ ယူတာ့ရ်ှရဲ့ဘော့စ် ဟောလ်က လက်ခံပေးလိုက်တာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတင် အသွင်ယူစစ်ဆင်ရေးစတာပါပဲခင်ဗျ။အိုဇာကီ ၈ ချက်ထဲကအတိုင်း ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှာစတန့်ပြကွက်တွေ၊ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်သွားတာတွေကို ရင်သက်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ။စတန့်ပြကွက်တွေ ဖောဖောသီသီ သုံးထားတဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက် စတန့်ကားကြိုက်သူတွေအတွက်ကတော့လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား . . .
Ericson Core Mariella Pérez Zoe Simijonovic
BoJesse Christopher Clemens Schick Delroy Lindo Edgar Ramírez James Le Gros Luke Bracey Max Thieriot Ray Winstone Teresa Palmer Tobias Santelmann
BoJesse Christopher Clemens Schick Daniel Bonjour Delroy Lindo Edgar Ramírez James Le Gros Judah Lewis Luke Bracey Matias Varela Max Thieriot Nikolai Kinski Ray Winstone Senta Dorothea Kirschner Seumas F. Sargent Teresa Palmer Tobias Santelmann
Option 1 sharer.pw 540 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 540 MB SD (480p)
Option3onedrive.live.com 540 MB SD (480p)
Option7onedrive.live.com 3.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 8 sharer.pw 3.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9yuudrive.me 3.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1